Barnaamijka GIS Software: GIS macmiilka loogu talagalay $ 25 iyo server server loogu talagalay $ 100 - Geofumadas
Luulyo, 2017 Featured, Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
Maanta waxaan ku noolahay muuqaal xiiso leh, oo ah barnaamijka bilaashka ah iyo iskaashiga gaarka ah ee gacan ka geysta warshadaha ku jira xaaladaha sii kordhaya ee tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Waxaa laga yaabaa in arrintani waa mid ka mid ah dhinacyada mashaariicda furfuran ay yihiin kuwo xooggan sida xalalka liisan la'aanta ah; Si kastaba ha noqotee, ka hor intaan labadan xagaa ah suuqa ayaa u soo baxa kuwa aan dooneynin inay u baxaan si furan, laakiin aanad bixin karin kharashka shirkadda loo yaqaan 'privatized privately'. Tani waa software qiimo jaban.
Waxaan mar walba ku dhuftey xalkan, sababtoo ah qaab jilicsan, waxay leeyihiin niche xiiso leh. Kuwa aan jeclaa ugu badani waxay ahaayeen Manifold GIS, maanta waxaan eegay barnaamijka Simple GIS Software, oo ah codsi leh waxyaabo badan oo xiiseynaya in la ogaado lana qiimeeyo.
Barnaamijka fudud ee GIS Software (SGS) wuxuu bixiyaa jawaab shaqo oo ka socota laba waji, ma aha oo keliya mida caadiga ah, laakiin wadashaqeyn, iyada oo loo marayo server kaasoo sidoo kale bixin kara adeegyada WMS (OGC Standard). Dhab ahaantii waa mid xiiso leh, tan iyo SGS waxay bixisaa awoodda ay ku qabsato, dukaanka, hagaajinta, falanqaynta iyo soo bandhigto xogta juqraafi iyo juqraafi; Isku darka awoodda iyo awoodda macluumaadka dhaqanka.
Soo jeedinta SGS waa inay noqoto software fudud oo si sahlan loo isticmaalo, oo leh gaabis waxbarasho oo gaaban iyo sida fudud ee loo sameeyo GIS oo leh xal kharash ah oo kaliya qiimaha 25. Inta badan waxyaallaha GIS ee Software wuxuu aad u la mid yahay waxyaalaha kale ee lacag la'aanta ah iyo kuwa macaamiisha ah; waxaa laga yaabaa in waxkax xiiso leh oo ku saabsan xalkan ay tahay waxqabadka, in la sameeyo hab sahlan waxa ugu badan ee u baahan user, iyada oo aan wax dhib ah ee badhannada iyo plugins. Barnaamijka GIS Software oo keliya ma soo saaro oo la soo bandhigo khariidado, waxa uu xisaabinayaa (iyo tan waxay u muuqataa mid la taaban karo) oo leh karti falanqayneed si ay u caawiso xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee ku salaysan xiriirka ka dhexeeya maaddooyinka.
Waan ka soo dejistay nooca tijaabada ah, waxaanan isku dayay inaan ka soo dejiyo guud ahaan lakabka xogta OSM UTAH. Waxay socodsiineysay qiyaastii 10 daqiiqo, taas oo ay qaadatay muddo dheer waa lakabka wadooyinka, laakiin sababta oo ah waxaan codsaday taas sida ku xusan geocode. Waxay ila tahay wax cajiib ah, inaan horeyba u rabay inay sameeyaan dalabyo kale, maxaa yeelay aakhirkii waxay hoos u dhigtay gundhigga gobolkaan oo dhan, waxay qabatay howlo dhisme topoloji ah iyo kala diris loogu talagalay beddelka xogta si ay u dhuujiso lakabyada. Iyada oo qaar ka mid VBA ay tafatiriso saaxiibkay «bakhti»Waxay sameysay dib-u-habeyn si ay u soo dejiso gundhigga Khariiddada Waddada 'Open Street Map' oo ku dhex yaal Bogotá iyo ... sida saaxiibkeen, Bombazo!
Sida lagu muujiyay, halkan ayaad ka soo dejisan kartaa lakabyada shp ee Map Street Open ee Bogotá, inta u dhaxaysa iskudhafyada -74.343, 4.536; -73.903,4.813.
Si daacadnimo ah ayay u qalantaa saacaddii nuska ah ee aan u go'ay.
Waxay u leedahay fududayntii falanqaynta raadinta filimka, oo loogu talagalay araajida nooca geomarketing. Awoodda 'falanqaynta u dhowaanshaha' ee barnaamijkan ayaa si fiican uga faa'iideysan kara shirkad kaabayaasha ah oo samaynaysa daraasado lagu dhisayo waddooyin si loo ogaado meelaha laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan. Waxaad ku biirin kartaa xogta GPS si aad u muujiso macluumaadka goobta waqtiga dhabta ah ama bixinta macluumaadka marin habka navigation oo laga bilaabo barnaamijka.
Khariidadaha khariidaduhu waa kuwo la aqbali karo, wax ku ool ah, waxay ka fikireen waxa ugu dambeyntii la raadinayo si loo soo gudbiyo fikradaha.
Isticmaal GIS Client - Miisaanka Barnaamijka GIS
Taageerada xogta dulinka ka shapefiles, GIS ah lakabyo Simple Graphic, DXF, GIS Simple ah lakabyo dulinka Server Iyadoo barasantigareeyaan nooca Event iyo database kasta via isku xira ODBC. tafatirka nooca CAD waxaa dhaqanka xad, amarrada caadi jeclahay kabayso, jar, meeriskiisuna, kala jabeen la hufnaan ku daro ama wax ka saar geesaha, tirtireyso / noqo ma dili xasuusta, inkastoo sameynta hawlaha culus, COGO taageero koorsooyin iyo masaafooyinka, iyo naqshad shaqo. Soo koobid, awood ku filan edbin.
Laga soo bilaabo cajiib ah, daabacaadda faylasha qaabka qaabka badan. Iyadoo la tixgelinayo in tani ay tahay fayl geedka googo'an oo leh xaddidnaanta xashiishadeeda 16, taas oo nooga timid annagoo ah nooca xaqiiqda dhabta ah iyo taas oo ay adagtahay in la sii daayo ka dib sanad ka badan 20.
Sida taageero raster ka mid ah BMP, jpeg, Tiff, jpeg 2000, MrSid, MRI Simple GIS (image xalinta multi), lakabyo Image Server GIS Simple, oo dhawaan WMS WMS ka mid ah tessellation (WMTS)
Macmiilka fudud ee GIS wuxuu ka shaqeeyaa Microsoft Windows. Waxay leedahay awoodda, iftiinka iyo shaqeynta si ay u shaqeeyaan sida barnaamijka GIS software. Haddii aad rabto in aad u isticmaasho baaskiil ama gaari, waxaad ku ordi kartaa kiniin taageera daaqadaha. Ka dhigayaa hawlaha caadiga ah ee maps mowduuc, nooc doorashada, shaandhaynta, weydiimo da'ayeen iyo sifooyinka, tafatirka iyo files arkaysid .shp in hab multiuser, ayaa tafatirka sare, soo saara maps, geocoding, wadada, iyo kuwo kale. Waxaan ka helaa karti ku filan inaan soo dejiyo gebi ahaanba Macluumaadka Khariidadda Furan ee Tusaale ahaan, tusaale ahaan, gobolka oo dhan oo Maraykanka ah, oo la socota geokoding gobolka ama Zipcode.
Waxaad abuuri kartaa khariidado jiheysan oo si faahfaahsan loo marin karo iyada oo la isticmaalayo dhowr fure. Waxa kale oo ku jira sawirro badan oo geoprocessing ah oo ka mid ah baaxad xiiso leh, isagoo awood u leh in ay ku habeeyaan software iyada oo la isticmaalayo Visual Basic ee Codsiyada (VBA).
Waxay soo saartaa wax soo saarka tayada la aqbali karo oo si toos ah loogu daabici karo ama loo soo bandhigi karo qaababka jumlada ah ee guud si loo geliyo xirmooyinka kale ee software.
Nidaam fudud GIS - Barnaamijka khariidaynta GIS
Marka la eego baahida loo qabo in la wadaagno xogta GIS marayo shabakad, degaanka, ama Internet broadband, Server Simple GIS waa server ah ee Microsoft Windows isticmaala TCP / IP oo ku jira server a standalone Web u ogolaanaya adeegaya xogta dulinka iyo / ama rasterized macaamiisha GIS iyada oo loo marayo shabakadaha xogta ama waxay bixiyaan adeegyo khariidad mareeg ah (WMS). version cusub ee Server kuu ogolaanaya in aad qaadato maps macmiilka fudud abuuray GIS iyo daabacaan sida WMS a hab caddaalad ah oo fudud.
Waa suurtogal in la adeegsado xogta laguna habeeyo aqoonsiga SSL. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu xiro AVL (Gawaarida Gawaarida ee Automated) iyada oo loo marayo fiilo loogu talagalay kontaroolka fog-fog ee loo marayo GPS.
Gebogebada, Barnaamijka Simple GIS Software, inkasta oo uu yahay qalab hagaya dadka isticmaala Waqooyiga Ameerika, wuxuu leeyahay karti xiiso leh oo ah xal kharash yar. Lacagta 25 waxaan filayaa in ka yar; Fikradayda waa barnaamijka macaamiisha-macmiilka, oo leh karti ku filan
Waqtiga ayaa sheegi doona inta ay le'eg tahay.
Tani waa Websiteka Barnaamijka GIS Software. Macluumaad gaar ah oo ku saabsan MIS macmiilka fudud, riix Halkan. Haddii aad rabto inaad ogaato oo ku saabsan Server GIS ee fudud, riix Halkan.
Post Previous«Previous Waxaan leeyahay xogta LiDAR - waxa hadda?
Post Next Python: luqada waa in mudnaanta geomaticsNext »